I-China yavelisa abavelisi beMask kunye nabaxhasi | Itekhnoloji yeShouzheng
Imodeli: Ukulahlwa kobuso obu-3-ply oBusasayo ubuso
Ukucaciswa: ii-10 ii-pcs / ibagi
Izixhobo: Ilaphu elingelolukiweyo kunye nefilitha encibilikayo
Ixabiso lokucoca:> 99%
I-1.Sks zenzululwazi sisixhobo esinokusetyenziswa ukunqanda ukusasazeka kwesifo sokuphefumla.
2.Okukunceda ukuvimba amathontsi amakhulu, isplashhes, iziqwengana, okanye isllatter enokuba intsholongwane kunye neebacteria, ukuyigcina ingafikeleli kumlomo nakwimpumlo.
Imigangatho yethu yemaski: YY0469-2011
I-BFE:> 99%, Imilinganiselo yokuhluza:> 99%
Ukhathalelo lonyango olungasasazekiyo kwimeko eqhelekileyo. Kuzo zonke iintlobo zabasebenzi bezonyango ukuba banxibe ngexesha lokungasebenzi, ukubonelela ngesithintelo esithile somzimba sokungena ngokuthe ngqo kwee-microorganisms ze-pathogenic, into ye-element.
I-1.Soviet mask> 99% ngexabiso eliphantsi kunye nekhwalithi ephezulu. Kukuthintela ukosuleleka kwizigulana kunye nokunyanga abasebenzi ngokubambisa iibhaktheriya ezaphalaziweyo kwiindawo ezinamanzi kunye neerosols emlonyeni wempumlo kunye nempumlo.
2.Umveliso: zii-300000 zee-pcs ngosuku.
3.Umvelisi oqhelekileyo, ovavanywa ngamaziko ovavanyo asemthethweni aseTshayina kwaye ahlangabezana nemigangatho yokuthumela yase China> 99% (sinxibelelane nengxelo yovavanyo).
Iqela lokuthengisa elinenzala, ngaphezulu kweminyaka engama-8 yamava orhwebo lwangaphandle. Iiyure ezingama-24 ezikwi-intanethi ukukunceda ukusombulula yonke imibuzo.
Edlulileyo: Imaski yaseburhulumenteni
Okulandelayo: I-Medical Mask
Imaski yoNyango esebenzayo
ply Uvavanyo Mask
Imaski yobuso engaqondakaliyo
Isixhobo seMask esibonakalayo
Umvelisi weMask ocacileyo
Imaskhi yoNyango engaqondakaliyo